မင်းကိုနိုင်ကို မြို့ရွာတိုင်းက ကြိုဆို
သမ္မတရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အရ သရက်ထောင်ကနေ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့မှာ လွတ်လာတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ရန်ကုန်အပြန် လမ်းတလျှောက် မြို့ရွာတိုင်းက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က သရက်အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို မကွေးတိုင်း ပြည်သူလူထုက သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုနေစဉ်။
Photo Courtesy of Messenger News Journal
ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်း သာယာဝတီမြို့ အရောက်မှာ မြို့နေလူထုက`ကိုမင်းကိုနိုင် အသက်ရာကျော် ရှည်ပါစေ’ လို့ အားရဝမ်းသာ အော်ဟစ်ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး ဒါဟာ ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ကိုမင်းကိုနိုင်ကို သွားရောက်ကြိုဆိုသူ အမျိုးသမီးတဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာ ဒီကနေ့ညမှာ ရန်ကုန်မြို့နေအိမ်ကို ပြန်ရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
မုံရွာထောင်က မနေ့က ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူ ၂ဝဝ၇ မျိုးဆက် ဗကသ အဖွဲ့ဝင် ကိုဒီငြိမ်းလင်းက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အလားတူ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်သူကလည်း အစိုးရအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းအတိုင်း အမှန်တကယ် သွားဖို့ ရည်ရွယ်တယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ပထမဦးဆုံး လက်ခံရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မနေ့က တောင်ကြီးထောင်ကနေ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူတွေထဲမှာ ၂ဝဝ၇ ရွှေဝါရောင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကိုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ကိုကျော်ကိုကိုနဲ့ ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင် ဆက်သွယ် မေးမြန်ထားတာကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
အကျဉ်းသား ၃၀၀၀ ကျော် လွှတ်ပေး
အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် နဲ့ ကာတွန်း အော်ပီကျယ်
ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အနွစ္သာရကိုသိရင္ ေတာင္းဆိုေနရံုနဲ႕မျပီးဘဲ တကယ္က်င္႕သံုးနိုင္ဖို႕အေရးႀကီးပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႕လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ မင္းကိုႏုိင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ မိပါသည္။
Jan 19, 2012 05:09 AM
BRAVO, BRAVO OUR TRUE HERO, KO MIN KO NAING!!! I do respect all you concepts and speeches!!
Jan 15, 2012 05:49 AM
ေအာ္ .......... ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ လမ္းေလွ်ာက္ေနသလိုမ်ိဳးကို ၿပည္သူလူထုက တစ္ခဲနက္ကို ႀကိဳဆိုေနတာပဲေနာ္ ........ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို႔ ကိုကိုႀကီးတို႔ အရွင္ ဂမၻီရတို႔ လြတ္လာတာကို လံုး၀ကို ၀မ္းသာတယ္ဗ်ာ .........
Jan 15, 2012 02:54 AM
Jan 14, 2012 04:34 PM